भाजपा विदेश प्रमुख चौथाइवा संग ओलिको गोप्य भेट्बार्ता के गर्न खोज्दैछन् ओलि ? – GALAXY
भाजपा विदेश प्रमुख चौथाइवा संग ओलिको गोप्य भेट्बार्ता के गर्न खोज्दैछन् ओलि ?
काठमाडौं,१८ साउन । भारतीय सत्तारुढ दल भाजपाका विदेश विभाग प्रमुख विजय चौथाइवासँग लामो कुराकानी गरेपछि नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले बरिष्ठ नेता माधब नेपालबाहेकको एकता चाहेको अभिब्यक्ति दिएको खुलेको छ ।
शनिबार अध्यक्ष ओलीले माधब नेपाललगायतका नेताहरुलाई पार्टी बिरोधी र देशद्रोहीको संज्ञा दिदै उनीहरुलाई एमालेमा ठाउँ नभएको प्रष्ट पारेका थिए ।
पार्टी एकताको लागि माहौल बनिरहेको बेला अध्यक्ष ओलीको यस्तो अभिब्यक्ति आएको थियो । यसको अघिल्लो दिन अर्थात शुक्रबार महासचिब ईश्वर पोखरेलले बिधानबिपरित गएर एकता नहुने बताएका थिए ।
महासचिब पोखरेललाई अध्यक्ष ओलीले नै त्यस कोणबाट बोल्न लगाएको खुलासा भइसकेको छ । एकताको बाताबरणलाई भाँड्ने गरी आएको ओलीको अभिब्यक्तिले एकता पक्षधरहरुलाई निराश बनाएको छ ।
एकताको लागि हदैसम्म लचिलो भएको र यसअघिका सबै गल्तीमा आममाफी भयो भनेर अभिब्यक्ति दिएको केही दिनमै अध्यक्ष ओलीमा आएको यो परिबर्तनलाई उनको पार्टीभित्र गम्भीररुपले अध्ययन भएको थियो । यसक्रमा ओलीले भाजपाका बिदेश बिभाग प्रमुख चौथाइवासँग पटक–पटक सम्पर्क भएको पाइएको स्रोतको भनाई छ ।
प्रमुख चौथाइवासँग एमाले अध्यक्ष ओलीले गएको हप्ता दुई पटक कुराकानी भएको उच्च स्रोतले जानकारी दिएको छ । नेता चौथाइवाले एमाले एकताका बारेमा ओलीसँग चासो राखेको बताइएको छ ।
‘एमाले एकताको अन्तिम चरणमा पुगेको खबर पाएपछि चौथाइवाले सम्पर्क गरेका रहेछन् ।’ उच्च स्रोत भन्छ ‘एकतापछि एमालेमा कस्ता राजनीतिक बिचारले ठाउँ पाउँछन् भन्ने मूल उनको चासो रहेछ ।’
भारतीय संस्थापन पक्षले एमालेको झलनाथ–माधब समूहलाई पटक्कै नरुचाउने सार्बजनिक भइसकेको छ । एमाले अध्यक्ष ओली समूहलाई सरकारमा टिकाउन भाजपाले खेलेको भूमिकाप्रति भारतीय सन्चार क्षेत्रले तीब्र आलोचना गरेका थिए ।
नेपालको संबिधान र लोकतन्त्रको बिरोधमा कदम चालेका ओलीबिरुद्ध नेपालमा सम्पूर्ण शक्ति एक ठाउँ आउँदा पनि भारतले ओलीलाई नै काँध थाप्ने कुराले नेपालसँगको कुटनीतिक सम्बन्ध बिग्रनेतर्फ भारतीय संचारमाध्यमहरुले भाजपाको ध्यानाकर्षण गराएका थिए ।
एमाले अध्यक्ष र भारतीय संस्थापन पक्षबिच बिचारको एकता भएको प्रष्टसँग देख्न र बुझ्न सकिन्छ । भारतले नेपाल धर्मसापेक्षित राज्य बनोस भन्ने चाहना राखेको छ । ०७२ सालमा नेपालमा नयाँ संबिधान निर्माण हुदा उसको मुख्य असन्तुष्टि धर्मनिरपेक्ष राज्य बनाएकोमा थियो । यही कारण उसले नेपालमा अमानबीय नाकाबन्दी लगायो ।
अहिले भारत मुलुकको सबभन्दा ठूलो दल एमालेलाई प्रयोग गरेर संबिधानबाट धर्मनिरपेक्षता हटाउन चाहन्छ । यस कुरामा एमाले अध्यक्ष ओली र भारतीय संस्थापनबिच सहमति बनिसकेको बताइएको छ । यही कारण अध्यक्ष ओलीको अति बिस्वास पात्र साँसद महेश बस्नेतले यस बिषयलाई पार्टीमा दर्ज गराइसकेका छन् । यो ओलीकै ईशारामा भएको आम बुझाई छ ।
ओलीले चाहेमा नेपाल धर्मनिरपेक्षताबाट पछि हट्न सक्ने भारतीय संस्थापनको बुझाई छ । तर पार्टीभित्र झलनाथ–माधब समूह भित्रिएमा यो बिषय एमालेले अघि बढाउन नसक्नेतिर पनि भारतीय संस्थापनको राम्रोसँग ध्यान गएको छ । त्यसैले पनि भारतीय संस्थापनले नेकपा एमाले एक नहोस भन्ने चाहना राखेको एमाले बृत्तमा चर्चाको बिषय बन्ने गरेको छ ।
अध्यक्ष ओलीले सबै गल्तीलाई आममाफी दिएको भन्ने अभिब्यक्तिबाट भाजपा चिन्चित बनेको बताइन्छ । त्यसैले बिदेश बिभाग प्रमुख चौथाइवाले खास कुरा के हो भनेर सम्पर्क गरेको स्रोतले जानकारी दियो । चौथाइवाले झलनाथ–माधब समूह एमालेमा भित्रिए भने धर्मनिरपेक्षताबाट पछि फर्कन एमालेलाई ठूलो चुनौति हुने बारेमा ओलीको ध्यानाकर्षण गराएको स्रोत बताउँछ ।
एमाले अध्यक्ष ओली आन्तरिक राजनीतिमा पुनः पकड स्थापित गर्न भारतीय संस्थापनलाई खुसी नै राख्न चाहन्छन् । एक बर्षपछि शेरबहादुर देउवा सरकारका बिरुद्ध अबिश्वासको प्रस्ताब ल्याएर आफ्नो नेत्रृत्वमा चुनाबी सरकार बनाउने ओलीको योजना छ । यसका लागि मधेशबादी दलहरुमा बिभाजन ल्याई देउवालाई कमजोर बनाउनु पर्ने हुन्छ । यो राजनीतिक खेलका लागि भारतीय सहयोगको अपरिहार्यताका बारेमा ओलीले बुझेका छन् । त्यही भएर उनले चौथाइवाको सुझाबलाई ग्रहण गरेको बताइन्छ ।
भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी र भाजपामा राम्रो प्रभाब राख्ने बिदेश बिभाग प्रमुख चौथाइवा र अध्यक्ष ओलीको निकै सुमधुर सम्बन्ध रहको बताइन्छ । उनी ०७७ साल मंसिरमा प्रधानमन्त्री र भाजपाको सन्देश लिएर नेपाल आई २५ गते प्रधानमन्त्री ओलीसँग लामो समय भेटबार्ता गरेका थिए ।
भारतीय बिदेश सचिव नेपाल भ्रमणमा आएको दुई सातापछि नै प्रधानमन्त्री मोदी निकट मानिने बिदेश बिभाग प्रमुख चौथावाई नेपाल भ्रमणमा आएका थिए । प्रधानमन्त्री ओलीका तत्कालीन परराष्ट्र मामिला सल्लाहकार डा. राजन भट्टराईले उक्त भेटमा दुई देशको बीचमा जनस्तरमा रहेको सम्बन्धलाई सुदढ बनाउने र बिचारको आदान प्रदान गर्ने विषयमा कुराकानी भएको बताएका थिए । ई–आर्थिक बाट